Shirkii wasaaradaha kalluumeysiga ee federaalka iyo maamullada oo lasoo Gabagabeeyey - Caasimada Online
Home Warar Shirkii wasaaradaha kalluumeysiga ee federaalka iyo maamullada oo lasoo Gabagabeeyey
Shirkii wasaaradaha kalluumeysiga ee federaalka iyo maamullada oo lasoo Gabagabeeyey
Wasiirka Kalluumeysiga iyo Kheyraadka Badda ee dowladda Federal-ka ah Cabdillahi Bidhaan Warsame ayaa maanta soo xiray shir laba maalmood magaalada Muqdisho uga socday Wasaaradaha Kalluumeysiga iyo Kheyraadka Badda ee Dowladda Federal-ka ah iyo Wasaaradaha Kalluumeysiga ee dowlad gobolleedyada.
Shirkan oo ay soo xaadireen inta badan Wasiitada Maamulada ayaa lagu lafa guray sidii ay Wasaaradaha u yeelan lahaayeen wada shaqeyn iyo iskaashi iyada oo ay hoggaamin doonto Wasaaradda Kalluumeysiga iyo Kheyraadka Badda ee heer Federal.
Wasiir Cabdillahi Bidhan Warsame oo shir jaraa’id uu waxyaabihii looga hadlay shirka uga hadlay ku sheegay in qodobo badan la’isla gartay oo ay ka mid yihiin sidii xeebaha looga wada ilaalin lahaa Kalluumeysiga sharci darada ah, Wasaaraduhu uga wada shaqeyn lahaayeen mashaariicda kalluumeysi ee dalka hadda laga bilaabay .
Wasiir Cabdillahi Bidhan Warsame waxa uu sidoo kale sheegay in Wasaaradda Kalluumeysiga iyo Kheyraad-ka badda ee dowladda dhexe ka taageeri doonto kuwa heer dowlad gobolleed dhinaca tababarada iyada Siminaarro shaqalohooda loo keeni doono Muqdisho halka shaqaalaha Wasaaradda Kalluumeysiga iyo Kheyraadka Badda ee Federal ay safarro ku kala bixin doonaan maamulada si ay khibradooda ula soo wadaagaan shaqaalaha kale ee dhiggooda ah.
Dhinaca kale Wasiirada maamul gobolleedyada ka socday oo intooda badan ay joogeen shirka labada maamlin socday ayaa ku ammaanay Wasiir Bidhaan shaqada kheyrul-caadiga ah ee uu qabtay intii uu Wasaaradda joogay iyo sida joogta ah ee uu xiriirka ula sameeyo.
Shirka labada labada maalin socday ee u dhexeeyey Wasaaradaha Kalluumeysiga iyo Kheyraadka Badda ee heer Federal iyo Maamul Gobolleed ayaa ku soo aadaya xilli dhawr maalmood kahor ay Wasaaradda Kalluumeysiga iyo Kheyraadka Badda ee dowladda dhexe saxiixday shatiyo Kalluumeysi oo heer caalami ah.